Kaynta Dhay | Djibouti Nature
Tag Archivi: Kaynta Dhay
(Turjumaad ku-meel-gaadh ah / Google) Djibouti Francolin waa jilicsanaan iyo jahwareer ah oo loo yaqaan ‘gamemird gamemird’ oo loo yaqaan ‘Critically Endangered’ oo kaliya oo laga og yahay laba shimbir oo muhiim ah oo shimbir ah (Forêt du Day iyo Mabla) oo ku yaal Jabuuti, taas oo ah mid aad u kala jaban oo hoos u dhacaya heerkulka iyo tayada, iyo dadweynaha ayaa hoos u dhac ku yimid. Tani waxay ka dhigan tahay, haddii aan waxba laga qaban, noocyada ayaa wajahaya khatarta aadka u sareysa ee mustaqbalka dhow (50% fursada toban sano / saddex jiil). Arrimaha muhimka ah ee noloshooda waxay u muuqdaan inay sii xumaanayaan hoygooda dabiiciga ah, sida […]
adnature Dabeecadda, Kala-duwanaanta abuurka, Shimbiro Dabeecadda, Gogorri, Kaladuwanaanta abuurka, Kaynta Dhay
(Turjumaad ku-meel-gaadh ah / Google) Beirada Beira (ama Beyrac ee Somaliya) waa noocyada dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee geeska Afrika ku yaal. Beira waa wakiilka keliya ee ku jira cirbadda lafdhabarta ee leh amarka Artiodactyla, qoyska Bovidae iyo Neotraginiae. Qaybteeda waxaa ku xaddidan buuraha, buuraha iyo gawaarida inta badan Waqooyiga Soomaaliya, iyada oo la sii wado meelo yaryar oo qaybo yar oo ku yaalla Koonfurta Jabuuti iyo Waqooyi-Bari Itoobiya. Aragtida guud ee noocyada quruxda badani waa klipspringer-sida. Midabka lakabka jirka ee aasaasiga ah waa midab, oo leh buro guduud ah, qoorta dheer iyo madaxa. Qolfida-cad oo hoosta ku jirta waa kala duwantahay muraayad madow-caan ah oo ka soo baxaysa […]
adnature Dabeecadda, Nuujiyeyaasha Bayrac, Dabeecadda, Kaladuwanaanta abuurka, Kaynta Dhay, Nuujiyeyaasha